कुलिङ ब्रेक भनेको के हो ?
- कुलिङ ब्रेक विश्वकप फुटवलमा फिफाले ल्योएको नौलो नियम हो ।
- यो खेल मैदानको तापक्रम ३२ डिग्री से. भन्दा बढी भएको अवस्थामा रेफ्रीले आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग गर्दै कुलिङ ब्रेक लिन सक्छन् ।
- यो नियमको पहिलो आधिकारिक प्रयोग सन् २०१४ मा ब्राजिलमा सम्पन्न विश्वकपको नेदरल्याण्ड र मेक्सिको बीचको खेलमा भएको थियो ।
- ३ मिनेटसम्म लामो हुने यो ब्रेकमा खेलाडिहरु आराम गर्ने, पानी खाने र चिसो तौलियाले शरिर र मुख भिजाउन सक्ने ब्यवस्था छ ।
1 वन ऐन, २०४९ ले गरेको वनसम्बन्धी विभाजन
2 नोवेल पुरस्कार घोषणा हुने दिनहरू/घोषणा गर्ने निकाय
3 Career News and Info जेठ २३, २०७४
4 Career News and Info असार ६, २०७४
8 कार्वन व्यापार
9 हिग्स बोसोन